श्रीमतीको मृत्यु भएको एक घण्टामै श्रीमानको पनि मृत्यु - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमतीको मृत्यु भएको एक घण्टामै श्रीमानको पनि मृत्यु
सुनसरी, साउन १ । इटहरीमा श्रीमान् र श्रीमतीको एकै दिन मृत्यु भएको छ। श्रीमतीको मृत्यु भएको एक घण्टाको अन्तरमा श्रीमानको पनि मृत्यु भएको हो।
इटहरी उपमहानगरपालिका–१३ खनारकी ७८ वर्षीया नर्बदा भट्टराईको मंगलबार साँझ पौने ७ बजे मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको शोकमा परेका उनका पति ८६ वर्षीय टीकाप्रसाद भट्टराईको पनि एक घण्टापछि हृदयघात कारण मृत्यु भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस घरको बगैँचामा महिलाको लास भेटिएपछि पूर्व जर्नेलमाथि कुटपिट
ट्याग्स: Itahari, sunsari
तनहुँ पहिरो अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, ५ बेपत्ता
नेपालमा कोरोना संक्रमण घटेकै हो?
भोलिदेखि बिजुली बस चल्ने
नेपाली पोर्न साइट चलाएको आरोपमा १ युवक पक्राउ
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए? (सूचीसहित)
अजयमेरु गाउँपालिकाद्वारा खानेपानी शुद्धता नाप्ने प्रयोगशाला स्थापना
कर्णाली प्रदेशमा मिसियो कोहलपुर नगरपालिका
काठमाडौं उपत्यका थपिए आज ९ कोरोना संक्रमित